စိတ်ပညာ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စိတ်အခြေအနေသည်မကြာခဏပြောင်းလဲတတ်သည်။ အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်များနှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်သလဲ Serotonin ။ nm အကြောင်းဖတ်ပါ။ "ပျော်ရွှင်မှု" ၏ယုံကြည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊
IQ ရမှတ်များကျော်ကြားသူများ၏ Albert Iinstein (သိပ္ပံပညာရှင်) ၂၀၀ ၂၀၀ Honore de Balzac (စာရေးသူ) ၁၈၇ ဘီလ်ဂိတ်စ် (စီးပွားရေးသမား၊ ပရိုဂရမ်မာ) ၁၆၀ အလက်ဇန်းဒါး Solzhenitsyn (စာရေးသူ) 200 ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာ (မင်းသမီး) ၁၅၁ Vladimir Putin (နိုင်ငံရေးသမား၊ သမ္မတ)
စိတ်ဝင်စားမှုစမ်းသပ်ခြင်း psychotype အခွင့်အရေး။ Check?
လူ့စိတ်ပညာအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု။ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်? မင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကိုငါကြိုက်တယ်!)) ငါ PLLL ကိုရတယ်။ စကားမစပ်ငါလက်ဝဲ) oho-ho-ho ... ကောင်းပြီ, ဖြစ်ပျက်)) ဒါဟာအဆင်ပြေအောင်ဒါ ...
လက္ခဏာများအမျိုးသမီးငြူစူခြင်းအသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လို .. ပေးပါ
မိန်းမမနာလိုသောလက္ခဏာများ ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ .. ဒီလူနဲ့သင်ဘယ်လိုနေနိုင်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။ ယောက်ျားရဲ့ ... အတူတူပါပဲ ... ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်၊ ငြူစူတဲ့သူကိုမြင်တယ်
break ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ စိတ်ဖိစီးမှု: brecha # 769; တန်ချိန်။ လက်ဆောင်ပေးမယ် မရ။ တမ်းတ - လျှော့ချရေး။ transNo အခေါက်။ 1) 2. Non- trans ဆိုတဲ့။ မုသားကိုပြော, မုသား, မုသား။ 1.cross ။ စကားပြောအနတ္တ, chatting ။ ထံမှ Yandex ရှင်းလင်းချက်အဘိဓါန်အဘိဓာန်။
ကောင်းတဲ့လူ ... ဒါကဘာလဲ
ကောင်းတဲ့လူ ... ဒါကဘာလဲ ဤသည်သည်လူ့ဘ ၀ အတွက်မြတ်နိုးအပ်သောလူ့ဘ ၀ အတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာပင်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှလက်ခံကြိုဆိုသောအရည်အသွေးအချို့နှင့်ကိုက်ညီသူဖြစ်သည်။
Electra Complex ဆိုတာဘာလဲ။ အမေကသားကိုချစ်တာလား၊ သမီးအဖေကိုချစ်တာလား။
Electra Complex ဆိုတာဘာလဲ။ အမေကသားကိုချစ်တာလား၊ သမီးအဖေကိုချစ်တာလား။ Electra ရှုပ်ထွေးသောအရာသည် Oedipus ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံနှင့်ဆင်တူပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်တွင်မိန်းကလေးများတွင်ထင်ရှားသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းစီမံကိန်းအစီအစဉ် - ၁။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေါင်းသင်းခြင်း 1. လူမှုဆက်ဆံရေးယန္တရားများ ၃။ လူမှုဆက်ဆံရေးအဆင့်များ ၄။ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ ၅။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဘဝလမ်းစဉ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုလူမှုဆက်ဆံရေးဖြစ်စဉ်၏လူမှုရေးဖြစ်စဉ်သည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းနှင့်တက်ကြွမှု၏ရလဒ် ...
ကျောင်းစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ၏တာဝန်ဝတ္တရားများမှာအဘယ်နည်း။ ပညာရေးစိတ်ပညာရှင်မကြာသေးမီကထွန်းသစ်စအလုပ်အကိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ် ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ကျောင်းများတွင်ဤရာထူးမတည်ရှိခဲ့ပါ။ ကျောင်းစိတ်ပညာရှင်၏အဓိကတာ ၀ န်မှာပညာရေးဖြစ်စဉ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
အဘယ်သူသည် realties အာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်အန်ခဲ့သလဲ
ဘယ်သူ့သူတို့ရဲ့အာရုံကြောတွေဒါမှမဟုတ်ဖိစီးမှုတွေကနေအန်ထုတ်ခံနေရတာလဲ။ နဗ်ကြောများသည်ဤအရပ်မှဖိအားတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်တွင်အဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သငျသညျအတန်ငယ် impressionable ဖြစ်ကြသည်။ သက်သာစေသောဆေးကိုမသောက်ရ။
ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကဘာလဲ။ Worldview - လှုပ်ရှားမှု၏ ဦး တည်ချက်နှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏လက်တွေ့ဘဝအပေါ်သဘောထားကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခြေခံမူများ၊ အမြင်များနှင့်ယုံကြည်မှုများအစုတစ်ခု။ ၎င်းသည်ပိုင်သောဒြပ်စင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပုံမှန်, လေးနက်သောဆက်ဆံရေးအလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါသူနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်သူကဆွဲဆောင်သလဲ? တစ်ခါတစ်ရံမှာ "mivins" လိုချင်တယ်။ ငါတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှု၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
... သူတို့က "အရသာနဲ့အရောင်အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမရှိဘူး" ဟုပြောကြသည်။
…သူတို့က“ အရသာနဲ့အရောင်အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမရှိဘူး” ဟုပြောကြသည်။ အရသာနှင့်အရောင်အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်များမရှိပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းအရသာနှင့်အရောင်ကိုရိပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမတူဘူး၊
ခြင်္သေ့အကြောင်းကို prompt အတွေးစကားပုံကတော့
ခြင်္သေ့များနှင့် ပတ်သက်၍ aphorisms ကိုပြောပြပါဗစ်တာဟူဂိုက“ ငါဟာယင်ကောင်ရဲ့ ဦး ခေါင်းထက်ခြင်္သေ့ရဲ့အမြီးကိုပိုကြိုက်တယ်” ဟုပြောသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံအခြားအရာတစ်ခုခုကိုပိုနှစ်သက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်မူ“ ရွှေခြင်္သေ့” ကိုအဓိကနေရာအတွက်ယူရန်“ အော်စကာ” ထက် ...
ချို့ယွင်းချက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ ??? လူတစ် ဦး သည်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အလုပ်မလုပ်သောအခါဖြစ်သည်။ ချို့ယွင်းချက်ရှိသောသူသည်ဘုရားသခင် (သို့) မိခင်သဘာဝအားဖြင့်ထိခိုက်ခံရသူဖြစ်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုခံစားရရန်တစ်ခုခုကင်းမဲ့သည်။
LIFE နှင့် DEATH ဟူသောစကားလုံးများအတွက်ပြောရလျှင်။ ဒီဟာတွေကဘာတွေလဲ။ သူတို့ဟာအတူတူပဲလို့ထင်တယ်။ သေခြင်းတရားကအနိုင်ရတယ်။ )) ထပ်တူအဓိပ္ပာယ်တူထပ်တူထပ်မျှ ... )) အဓိပ္ပာယ်တူအဓိပ္ပာယ်ဝေါဟာရတွေ LIFE - အာဟာရ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်အတွေးများရှိပါ။ ဘာလုပ်မလဲ ? အဘယ်သို့ငါပြောနိုင်, တ ဦး တည်းအရာ .... ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်မှန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ...
Dream: တစ်ကွောငျကလေးမှမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါ။ ဒါဟာဘာလဲ?
Sleep: ကလေးငယ်ကိုမွေးဖွားပါ။ ဘာအတွက်လဲ နောက်မှသင့်အားငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်မပြုနိုင်ဟူသောအတွေးတစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။ ငါအရာရာကိုကြေငြာသင့်သလား) မတ်လကုန်ပြီ။ အိမ်မွေးဘွားကိုမွေးရန်အိပ်မက်သည်အိပ်မက်တစ်ခုထဲတွင် ...
ဘယ်လိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လဲ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးပါဘူး, သူတို့ကကျယ်ပြန့်။ အကျိုးစီးပွားကျဉ်းမြောင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပိတ်ဆို့ခံထားရသောသူများအတွက်အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသောအမြင်၊ ၎င်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားခြင်း၊ စာပေမှသင်ယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,859 စက္ကန့်ကျော် Generate ။